GTT International - Genève: 29 marsa 1947 - 29 marsa 2014: Iray ihany ny fahavalo tamin'izany ka hatramin'izao.
29 marsa 1947 - 29 marsa 2014: Iray ihany ny fahavalo tamin'izany ka hatramin'izao.
Ho fanamarihana ny Tolom-panafahana nataon'ireo Malagasy Tia Tanindrazana niady sy mamoy ny ainy nanohatra ny mpanjana-tany frantsay.
Azo ambara fa iray ihany ny fahavalo tamin'izany ka hatramin'izao, dia ireo tompo-menakely tsy mitsahatra mangorona ny harenantsika. Ny endrim-panjanahana fotsiny no tsy mitovy fa ny fototra dia iray ihany.
Mbola hanaiky hatrany ve isika ho zanahin'ny mpanjana-tany? Io no fanontaniana mibosesika ao an-tsaina.
Raha mbola teao mantsy ry dadabe, ry bebe, ry dada sy ry neny dia tsy ho kamboty toy izao ny Malagasy.
Tamin'izany vitsy ireo manam-pahaizana, fa maro no tia Tanindrazana. Ankehitriny kosa, be ireo avara-pianarana fa tsy sahy maneho na menatra mihitsy mijoro amin'ny maha-Malagasy azy.
Be olo-manga isika fa mahantra olon-kendry. Be manam-pahaizana fa mahantra olona tena tia Tanindrazana.
Indreto ary tononkalon-dRado, olo-manga mpanoratra tia Tanindrazana antenaina hamoha indray ny fitiava-Tanindrazana mety matory any anatintsika Malagasy rehetra any.
Mihainoa finaritra Tompoko.